Namuhla, thina sikanye nawe uyoba nesithakazelo intela lwezokuthutha Bashkiria. Lokhu lokukhokha ezweni ngalinye kanye nesifunda. Bashkiria - akujiki. Lapha has iqoqo layo imithetho ngokukhokhwa. Futhi izici izibalo. Nokho, lezi zikhathi afakiwe isihloko Russian Federation ngamunye. Futhi ngakho manje kufanele bajwayelane intela lwezokuthutha isimiso. Lolu lwazi kungakusiza ukuba ugweme izinkinga ezivamile kwezixuku. Yini setha intela imoto Bashkiria? Kuyini imayelana nani?
intela Imoto - lena ...
Ngaphambi okuthile ukukhokha, udinga ukwazi ukuthi uhlobo uhlelo yokukhokha anayo. Phela, izakhamuzi bavame nje abaqondi onjani izimali endaweni yengcebo isimo asikhiqizayo. Lowo Mbhalo wangonyaka we lokukhokha zivela? Ngakho, kumelwe uyikhokhe. Lena isikhundla okungalungile, ikakhulu ngokuphathelene intela ezokuthutha. Prakthiza ebonisa ukuthi ngokuvamile kakhulu it is ubheke "zonke ilandelana."
intela Ezokuthutha - inkokhelo yonyaka saziso kubanikazi izimoto. Iphuzu elibalulekile lapha - imoto yakho kufanele ngempela abe motor. Ngakho, ngokwesibonelo, ibhayisikili akudingi nokukhokhwa kwentela. Futhi skateboard, futhi.
intela Ezokuthutha ezi- osayizi abathile futhi iyona lesifunda. imithetho ukubala asethwe endaweni ngayinye. Ukuze ukuthi intela ezokuthutha ikhokhwe (e Bashkiria nezinye)? Ukuze yokubhalisa imoto endleleni. Le nkokhelo ikuvumela ukuhamba ezizungeze umuzi izwe. Ngaphandle kwayo, awukwazi ukuthola beshayela.
Ingabe ngiye kuye?
Ingabe kufanele ngikhokhele motor intela imoto (eMoscow nakwezinye izifunda)? Lo mbuzo uxaka izakhamuzi eziningi. Impendulo nakanjani ngeke kusebenze. Futhi konke lokhu ngoba isihloko Russian Federation ngamunye has okuhlukile lalo. Futhi ukuba enembile, imikhakha abantu abangakwazi bazuze isaphulelo noma engakhokhi idokhumenti yokukhokha.
Nokho, uma ungenawo aphathe abahlomulayo, singasho into eyodwa - kufanele ukhokhe. Kuphoqelekile. Kodwa kuphela uma ubungaba nemoto noma yimuphi omunye imoto. Ukuze ukushayela yayo proxy ngeke icala le ntela.
2014 intela imoto (Bashkiria hhayi kuphela) has izigaba eziningana bahlomule. Ababona, njengoba kuye kwashiwo, noma owasala ngokuphelele lokukhokha, noma ingxenye kuphela. Ubani angaba nethemba lokuthethelelwa "shirking" ethile ekukhokheni ngokomthetho?
Okokuqala, akhutshaziwe. Izakhamizi abanale iqembu 1 noma 2 ukukhubazeka ushwele ngokugcwele wentela ezokuthutha. By the way, izinhlangano ubakhonze (ezokuthutha nokunye) - kanye.
Okwesibili, Veterans namaqhawe zaseSoviet Union ngaphandle kokuphazanyiswa. Lokhu kungenzeka futhi ihlanganisa servicemen abake ezithathwe ingxenye ezingxabanweni. Ngamanye amazwi, sabhekisa empini.
Okwesithathu, amafemu kanye nezinkampani ukuthi bekwi ukudalwa kanye nokubuyiselwa imigwaqo abakwazi ukukhokhela imoto intela imoto Bashkiria. abahlomulayo okunjalo Zimbalwa kakhulu empeleni.
Okwesine, imindeni emikhulu. Futhi ekhululiwe ngokugcwele wentela ezokuthutha. Kulesi inothi: emkhayeni kufanele bube ngaphezu kuka-3 izingane. Uma kungenjalo, lokhu iyunithi yezenhlalakahle akubhekwa elikhulu.
Yini asebekhulile? Abakhulu - waphakade inzuzo abamukeli. Kodwa, njengoba umkhuba imibukiso, uma kuziwa izinkokhelo kuleso sakhiwo, abanye amalungelo abo linyamalale. Ezokuthutha intela (eMoscow futhi hhayi kuphela) iyathinteka.
Into wukuthi abantu ababehambe ngeholide, akhokhe imali ukuze kumele yengcebo isimo. Ngaphandle okokufaka parallel ku isigaba abahlomulayo, kukhona sokuthola yokukhokha. Ngokwesibonelo, uma umuntu enokukhubazeka, noma sobudala.
Uma kungenjalo, inkokhelo kuyodingeka ukukhiqiza. Kodwa hhayi ngokugcwele. Futhi-50% kuphela ukuthi elikhokhwayo ukuze. It kuvela ukuthi impesheni anelungelo isaphulelo. Uma une impahla, zikhona izindlela eziningana ezokuthutha, leli lungelo kutholwa kuphela omunye wabo. Wena ukuzibizela ku kuyini. Ukuze ukuthola izaphulelo kuyodingeka zisebenza ehhovisi lentela. Ngaphandle kwalokhu, kuzodingeka ukukhokhela izindleko ngokugcwele.
Indlela ukuthola kahle ukuthi kufanele ukhokhe zokuhamba kwakho? Lo magazini kuyinto ukukhathazeka okukhulu kuzo zonke izakhamuzi. Futhi ukuphendula ngezindlela eziningana. Okokuqala, umshini wokubala kuzokusiza intela imoto (ngonyaka 2014-2016). Lolu hlelo lokusebenza kusiza ukubala inani eliqondile ukukhokha ngesisekelo nemingcele eziningana imoto yakho. Nokho, le ndlela akuyona olunembile kakhulu. Uye ngephutha.
Okwesibili, ngeke intela. intela Imoto, njenganoma iyiphi enye, ungathola lapha. Vele ucingo emagunyeni intela endaweni yakini, bese ubuza imibuzo. Ngemva kwesikhathi esithile, uzokwaziswa ulwazi olulungile. On the Internet ukuba bakwazi ukuxoxa akudingekile - inqubo izobanjezelwa by cishe inyanga. Yilokho kangakanani udinga ulinde impendulo.
Okwesithathu, zonke ingabalwa ngokuzimela. Uma wazi ezinye input. Futhi amafomula ukubala ezimbalwa. Akunzima ukwenza kanjalo. intela Imoto wokubala (iminyaka 2014-2016) ngeke akunike ngokunemba ezinjalo. Ngakho-ke, abantu abaningi bakhetha kuyinto ukubala siqu. Manje ukuthola indlela usisebenzisa.
Okokuqala sidinga ukuthola lokho okudingekayo ukuze izibalo. Ezokuthutha intela (eMoscow Region hhayi kuphela) okungenani 4 formula eyokusiza ukuze akhokhe izikweletu kulo msebenzi. Uma ngikhuluma iqiniso, abazi zibangele nezinkinga. Ikakhulukazi uma unayo yonke idatha ezidingekayo.
Esokuqala futhi ebaluleke kakhulu - ngesilinganiso intela imoto. 2014 noma yimuphi omunye ukuthatha kuso? Lokhu isilinganiso sentela sabelwe onyakeni omusha. Lokhu kusho ukuthi kufanele uthole ukwazi wakhe ngesikhathi okudingayo. Isilinganiso sentela (Ezokuthutha) - izindleko eyodwa amahhashi.
Eyesibili ingxenye - amandla motor. Njengoba lubonakaliswa amahhashi. Amandla ngaphezulu kusukela imoto, ayanda yokukhokha.
Eyesithathu ingxenye - empeleni isibalo sezinyanga kobunikazi imoto. Lokhu value kubalulekile kuphela uma une imoto esingaphansi konyaka e impahla. Uma kungenjalo, asihlobene.
Lesi sakamuva kubalulekile kuphela - Kayisilutho ngaphandle okubizwa ngokuthi isinyathelo-up isilinganiso. Yena usebenza kuphela imishini ukuthi singabakaNkulunkulu esigabeni okunethezeka. Yiqiniso, isimo sengqondo esifanele itholakala kuphela izimoto ezithwala.
Awu, manje ungafunda ngqo ukuthi ukwenza izinkokhelo. intela Ezokuthutha e Bashkiriya nezinye izindawo has indlela efanayo umsebenzi. Okuwukuphela umehluko entela. Bobabili esifundeni yabo.
Ifomula ejwayelekile - lena lapho amahhashi injini iphindwe ngesilinganiso intela imoto. It kuvela nenani eliqondile ezokwenza wafaka ekhokhelwe. Akukho nzima, angithi? Uma une imoto kanokusho, formula ephakanyiswayo kufanele iphindwe i ezengeziwe eziphawulwe siphindaphindeka isici.
Okufanele ukwenze nge ezokuthutha, okuyinto is owned by esingaphansi konyaka? Inombolo izinyanga kobunikazi hlukanisa imali yazo ngo-12 Manje, bande lesi sibalo ngamandla injini yemoto futhi kwesilinganiso sentela. Endabeni imishini zikanokusho futhi kuyabiza kuyadingeka ukuze ngaphezu kwalokho uphindaphinde isamba okubangelwa isinyathelo-up isilinganiso. Okunethezeka izimoto kuwufanele ruble ezingaphezu kuka-3 million. Futhi sokubalwa esiqondile intela ku ezokuthutha kuleli cala kungcono ukusebenzisa wokubala ekhethekile inthanethi.
Izinga lentela imoto (2014, Bashkiria), njengoba iye yatholakala, kudlala indima enkulu izibalo. Ngakho-ke, kubalulekile ukwazi. Nokho, izimoto, amabhasi, izithuthuthu, amaloli ngisho motor izikebhe efakwe ngokwehlukana. Lokho esinakho kulesi sici nase-2014? idatha Basic ethulwa ngezansi.
Engine (amandla n. S.) Isilinganiso sentela (in ruble)
kuya ku-100 10
Engine (amandla n. S.) Izinga lentela imoto (in ruble)
Motor (amahhashi) Ukukala (ruble)
kuze kufinyelele 100 okufakayo 12
Ngakho, kungenzeka kanjani lokho, uma unalo ilungelo lokuthola izinzuzo? Ezokuthutha intela (eMoscow futhi hhayi kuphela) kudinga, njengoba sishilo, pre-ekwelapheni isakhamuzi nge isitatimende amalungelo abo ngokwanele. Kwenze akunzima kangako. Into esemqoka ukuqoqa uhlu ezithile kwemibhalo. Yini? Lezi zihlanganisa:
isitatimende esikhombisa uhlobo izinzuzo;
isitifiketi esiqinisekisa izinzuzo;
ikhadi nempesheni kamazisi yasebusosheni (uma ekhona);
SNILS futhi INN.
Uma ukhokha izikweletu esengeziwe ukuthi kwakungafanele, ukhiphe ukubuyiselwa kwemali. Kanjani ncamashi? Ukuze Kulolu hlu olungenhla kwemibhalo edingekayo ukwenza irisidi yokukhokha (hhayi ningi than 3 iminyaka) kanye nemininingwane yasebhange ukuze ukudluliswa kweemali.
Phawula - abantu intela ku ezokuthutha phambi 1 Disemba, inhlangano - ngaphambi 1 Mashi. Inkokhelo phansi ngokuvamile ikhokhwe kuze April 30 (ekupheleni kwesikhathi intela).
Njengoba ikhokhwe kusuka intela efulethini yokuthengisa
Okufanele ukwazi ngezinzuzo intela ezokuthutha
Indlela yokutshala Clematis ngaphandle kwezinkinga
Tattoo "ingwane": Inani, izindaba eziqanjiwe nezinganekwane, ukukhethwa thumbnail
Imithi emalungeni - sokuqaqamba kwamalunga ikhambi
Ibhayisikili Rock Machine: Uhlolojikelele, izici, izici onobuhle